Paul Pogba Oo Kashifay Qaabka Ay Diinta Islaamku Uga Caawisay In Uu Noqdo Qaf Aad U Dagan – Wararka Ciyaaraha Maanta
Paul Pogba Oo Kashifay Qaabka Ay Diinta Islaamku Uga Caawisay In Uu Noqdo Qaf Aad U Dagan
June 11, 2019 kooxda Premier League, Wararka Maanta 0
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Man United ee Paul Pogba ayaa ah xiddig kubada cagta ah laakiin waxa uu garoonka dibadiisa ku leeyahay nolol caadi ah waxana uu shaaca ka qaaday qaabka ay diinta Islaamku uga caawisay in uu noqdo qof dagan Naf ahaan.
Pogba oo diinta Islaamka ku biiray markii uu jiray da,da labaataneedyada ayaa dhawaan booqday Xaska oo ku yaala Mecca gaar ahaan bishii Barakaysnayd ee Ramadan isaga oo la socday xiddiga ay isku xulka yihiin ee Kurt Zoum.
Inkasta oo uuna ku soo korin diinta Islaamka hadana hooyadii ayaa ahayd Islaam kuna dhalisay in uu xiddiga koobka adduunka ku guulaystay ku biiro diinta Islaam-ka.
Xilli uu waraysi siiyay wargayska The Times xiddiga khadka dhexe ayaa wax laga waydiiyay waxa ay diinta Islaamku ula macno tahay waxana uu yidhi” Wax walba, waa sababta aan wax walba uga mahad celinayo”.
“Waxa ay iga dhigtay qof is badalay oo aqoonsaday waxyaabaha qaar nolosha, waxa ay xitaa iga dhigaa qof aad u dagan naf ahaan, waxa ay ahayd wax fiican oo balay noloshayda sababta oo ah kumaan dhalan diinta Islaam-ka inkasta oo ay Hooyaday ahayd Muslim, kumaan Korin Islaam-ka waxana aan Ixtiraamaa qof walba”.
Xiddiga ayaa la waydiiyay markii uu go,aansaday in uu noqdo Muslim waxana uu yidhi” Waxa aan u Islaamay sababta oo ah waxa aan leeyahay saaxiibo badan oo Muslim ah mar walbana waan ka hadalnaa’ayuu sii raaciyay.
“Waxa aan is waydiinayay su,aalo badan markii aan bilaabay baadhitaan ii gaar ah, waxa aan salaad la tukaday saaxiibaday hal mar waxana aan dareemay wax aad u fiican”.
“Run ahaantii diinta Islaamka ayaa ii furtay Indhaha iyo waliba maskaxdayda waxana ay iga dhigtay qof fiican. Waxa aad tahay qof Bani aadam ah waana in aad Ixtiraamto waxa aad tahay, Diinta aad haysato, Midabka aad tahay iyo wax walba, Diinta Islaamku waxa ay Ixtiraamtaa Bani aadanimada”.